सिर्जना सुवेदी -
अनन्त वाग्ले -
रवीन्द्रनाथ टैगोर, अनुवाद-जीवन क्षेत्री -
जुन तारा उनको झुप्रोमा टल्किन्छन्,
तिनैको टलक आइपुग्छ मेरो घरमा पनि
जुन वर्षाले उनको पाखो भिजाउँछ,
त्यसैले हाम्रो कदमको जंगललाई मख्ख पार्छ
महेन्द्र पौडेल -
नवीन प्यासी -
गनेश पौडेल -
घर परिवारले बुझ्न सकेका थिएनन्। बेलुका ६ बजेतिर ऊ घरबाट निस्केको हुनुपर्ने परिवारको अनुमान थियो। त्यसपछि नै उसको खोजी शुरु भयो। तर भोलिपल्ट बिहान उसको मृत शरीर बालाजु बाइपास माथिको खोल्सामा भेटियो। खोज्न त साँझदेखि नै सबै लागेका हुन् तर यतातिर कसैको ध्यान गएन। उसका साथीहरु र नातेदारहरुसँग सोधपुछ भयो, जानसक्ने ठाउँमा मान्छे पठाइयो, तर घर माथिको जंगलतिर भने कसैले विचार गरेनन्। बिहान पानी भर्न आएको ट्यांकरको ड्राइभरले रातो कपडा देखेपछि पो हल्लीखल्ली भयो। जंगली जनावरले चोक्टा लुछेर विकृत बनाएको अवस्थामा बेहुलीको शव भेटियो।
बलराम अधिकारी -
यो बुद्धचेत फ्रेन्च मनोविश्लेषणमा पनि उत्रेको देख्छु। मनोविश्लेषक ज्याक लकाँले जीवनलाई डिस–इज भनेछन्। लकाँसँग मेरो पूरै सहमति। अङ्ग्रेजीको डिस–इजलाई मनोविश्लेषणले दुई अर्थमा खेलाएको छ। पहिलो, डिसइज अथवा अनइज। यसको अर्थ जीवन असहज छ भन्ने हुन्छ। शारीरिक असहजता, मानसिक असहजता, दिनको असहजता, रातको असहजता। यसको दोस्रो अर्थ डिजिज अर्थात् रोग भन्ने हो। यसले जीवन रोग हो भन्छ। जहाँ जीवन, त्यहाँ रोग। हरेक असहजता सुक्ष्म रोग। हरेक असहजतामा, रोगमा अलिअलि मरणको अंश रहेको हुन्छ।
उत्तम रिमाल - हो हजुर हो मेरा आँखा छन् सद्धे नै छन् दुइटा नै छन् जसले सबै काम ठिकसँग गर्छन् बस् देख्दैनन् किनकी म नेपाली हुँ। जतिसम्म हाम्रा नेताले नेपालीलाई भेडा सोच्दारहेछन् म त्यस्तो लाटो पनि छैन मैले आजभन्दा हिजोमै रमाउनू मेरो रहर वा चाहना होइन मेरो आज ...
रामगोपाल आशुतोष -
कसैले भन्न सक्छ
यो विश्वमा सबैभन्दा
उच्चारण हुने शब्द के हो?
सन्तोष पौड्याल -
निभाउँछु उही एस्ट्रेमा ठुटो चुरोट
र, प्रश्न गर्छु आफैलाई
मनभित्र एकान्तमा कतै किन चिच्याउँदैछ बच्चु कैलाश?
‘टाढा टाढा जानु छ साथी, एकफेर हाँसीदेऊ’
गम्भीर खेलवाड भएको छ मेरो स्वास्थ्यमाथि
तपाइँको ‘सर्वोच्च’ अगाडि आमरण अनशन बसिरहेको छ
यो द्वन्द पीडित
दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।
रजनी ढकाल -
मतदान सकिए पछि मध्यरातमा मतगणना प्रारम्भ भयो। मतगणनास्थलमा उम्मेद्वारलाई निषेध भनिएकाले ऊ जान पाएन। वरिष्ठ ट्याक्सीचालक रुद्रमान श्रेष्ठ उसको प्रतिनिधि बनिदिए। मतगणना सकियो। चुनावको नतीजा सार्वजनिक भयो। सन्तबहादुरले दुई मत पाएछ।
रेशम विरही -
बिहानपख आमाको देहान्त भयो। मैले कर्म दिने आमा पनि गुमाएँ। आमाको अन्तिम संस्कारको लागि निस्किएको शवयात्राले हामीलाई चकित बनायो। नेपालगञ्जबाट शव घरमा ल्याई नपु¥याउँदै मानिसको भीड लागिसकेको रहेछ। लगभग जिल्लाका अधिकांश राजनीतिक मानिसहरूको उपस्थिति थियो। मृत्यु पछिको यो समवेदनालाई मैले विभिन्न अर्थमा परिभाषित गर्न खोजेँ। मन वेदनाले थिलथिलो भए पनि चेतनाको एउटा हिस्सा यसको परिभाषित अर्थतिर घोत्लिन थाल्यो।
मुना चौधरी -
घरको पुरै सदस्य एकै पटक बसेर खाना नखाने परम्परा थियो। पहिला पुरुषहरूलाई खाना खुवाउँनुपथ्र्यो। त्यसपछि मात्र स्त्रीहरू खाना खानुपथ्यो। गुहालीमा तिनओटा ओछ्यान लागेको थियो। एउटा ओछ्यानमा म सुतेँ। एउटा ओछ्यानमा बुढो सुतेको थियो र अर्को ओछ्यानमा बुढोको छोरो सुतेको थियो। स्त्रीहरू घरमा ढोका लगाएर सुतेका थिए र पुरुषहरू गुहालीमा सुत्नुपर्ने परम्परा थियो। बुढीले कुश्मालाई आफ्नो रुममा सुत्न दिएकी थिई। बुहारीले बच्चाहरूलाई लिएर अर्को रुममा सुतेकी थिई। बुढोको छोरा पनि गुहालीमा सुतेको देखेर म छक्क परेँ। ऊ सधैँ गुहालीमा सुत्दो हो भने कसरी तिनओटा बच्चा जन्मायो ?
जिन्दगीमा धेरै कुरा एक्कासी हुन्छ। जस्तो कि, अहिले मलाई एक्कासी भाउन्न भएर आयो। आँखै अगाडि हुनुपर्ने थियो धरहरा। तर, मैले धरहरा देखिनँ। कुद्दै गएँ त्रिपुरेश्वरपट्टिको आकाशे पुलमाथि। तर, मैले अझै धरहरा देखिन। कतै म ‘एम्लोफोबिया’को शिकार त भइन? बेतोडले कतै कुद्ने मन भयो। चुपचाप त्यहीँ ठिंग उभिने मन पनि भयो। म किंकर्तव्यबिमूढ भएँ। के गर्ने/के नगर्ने पहिल्याउन सकिन। मलाई वान्ता आउलाजस्तो भयो। आकाशे पुलबाट निस्फिक्री छाद्न पनि सकिन। म ठूलो स्वरले चिच्याउँदै कराएँ, कहाँ गयो धरहरा?’
नमन राई -